ओमान, कतार र इजरायलका प्रस्तावित राजदूत शर्मिला पराजुली, निरञ्जन थापा र रमेश कोइरालाका विरुद्धमा उजुरी परेको छ । गम्भीर उजुरी शर्मिला पराजुली र रमेश कोइरालामाथि परेको छ भने थापाविरुद्ध एकमात्र उजुरी पर्‍यो । तर, उजुरीले केही लछार्दैन भनेर यिनीहरु सुनवाईप्रति विश्वस्त छन् ।
त्यसो भए संसदीय सुनवाई भनेको कर्मकाण्डमात्र हो त ?
थापाविरुद्ध मल्लिक आयोगले दाग लगाएको भनिए पनि शर्मिला र रमेश कोइरालाविरुद्ध भने मानव बेचविखन, वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा परेको र मेनपावरसम्बद्ध भनेर किटानी उजुरी परेको छ । यद्यपि यी उजुरी पहिले पनि परेका थिए र शर्मिला र रमेशको नाम रद्द गर्ने मूडमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार टिकाउन बहुमत पुर्‍याउने बाध्यतामा परेर तिनको नाम पुन: सिफारिस गरेका हुन् । नेपालीलाई ठग्ने, विदेश पुर्‍याएर बिचल्लीमा पार्ने व्यक्तिहरु नै विदेशमा राजदूत भएर जाने भएपछि नेपाल झन ठगिने निश्चित भएन र ?
गम्भीर उजुरी आप्रवासन सम्बन्धी एक आइएनजीओको उजुरी छ । त्यो उजुरीलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनदेखा गर्न मिल्दैन । अनदेखा गरिए पछि यो नजीर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठ्न सक्ने मुद्दा हुने बताइन्छ ।
श्रीमान र परिवारजनले थुप्रै वैदेशिक रोजगार संस्थाहरु चलाउने र श्रीमती अथवा श्रीमान ओमन, कतारजस्ता वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुको ताँती भएका मुलुकमा राजदूत हुने भएपछि यिनले अभिभावकको दायित्वभन्दा मुनाफाखोर दलालको भूमिका निभाउने निश्चित छ । त्यसैले शर्मिला र कोइरालाको नाममा संसदीय समितिलाई सुनवाई गर्न गराउन मुस्किल छ भनिदैछ ।
राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त भएका भए पनि अष्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत लक्की शेर्पा, दक्षिण कोरियाका लागि अर्जुन जंगबहादुर सिंह, जापानका लागि प्रतिभा राणा, डेनमार्ककका लागि युवनाथ लम्साल, बंगलादेशका लागि चोपलाल भुसाल, बहराइनका लागि पदम सुन्दास, म्यानमारका लागि भीमकृष्ण उदास, श्रीलंकाको लागि विश्वम्भर प्याकुरेल र साउदी अरेवियाका लागि महेन्द्रप्रसाद सिंह विरुद्ध उजुरी नपरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी सिफारिसकर्तालाई जस्तोसुकै उजुरी परे पनि रद्द गर्न दुई तिहाई चाहिने भएकाले सिफारिस भएका सत्तारुढ दलका झोलेहरु देशको राजदूत हुने चाहिं पक्का छ । त्यसैले यी सिफारिसमा परेकाहरु जस्तोसुकै उजुरीले केही लछार्दैन भनेर गम्केर बोल्ने गरेका छन् ।